Dadweyanaha Degmadda Lixaad oo Cabdi Warsame Dib u Doortay -
Maalintii talaadada ee taariikhda bisha November ahayd 11/07/2017 ayaa waxaa magaalooyin badan oo dalka Mareykanka kamid ah ka dhacay doorashooyinka dowladaha hoose iyo kuwa gudoonka gobolka.
Haddaba magaalooyinka ay doorashooyinku ka dhacaceen waxaa kamid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Musharixiin Soomaali ah oo ay tiradoodu gaareyso 8 qof ayaa iyagu kuraas u tartamayey gobolka Minnesota. Saddex qof oo ah musharixiinta Soomaaliyeed ee tartamaysay ayaa iyagu ku guulaystay xilkii ay u ordayeen.
Dadka guuleystay waxaa ka mid ah gudoomiye Cabdi Warsame oo isagu kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, kursigan lagu tartamayana horay u hayey. Mursharax Cabdi Warsame ayaa ka guuleystay Maxamuud Nuur iyo Faadumo Yusuf oo iyaddu mataleysay xisbiga Jamhuuriga.
Loolankan loogu jiray kursiga degmadda lixaad ee magaalada Minneapolis ayaa ah mid aad loo hadal hayey, olole aad u weyna ay galeen dhinacyadii iyagu u tartamayey in ay hantaan xilka kursiga gudoonka degmadda lixaad.
Dadweyana degan degmadda lixaad ayaa iyagu dib u doortay musharax Cabdi Warsame oo isagu kursigan soo hayey afartii sanno ee la soo dhaafay.
Cabdi Warsame ayaa habeenkii talaadada ee ay doorashadu dhacday khudba u jeediyey taageerayaashiisa iyo dhamaan dadkii garab istaagay ololahiisa doorasho. Gudoomiye Cabdi Warsame oo u mahadceliyey dhamaan dadkii xaadirka ku ahaa xarunta xafladaha ee Al-Nuur, halkaas oo ay ugu dabaad dagayeen guusha u soo hoyatay ayaa yiri, “ Waad ku mahadsantihiin dadaalka iyo dulqaadka iyo taageerada dheeraadka ah ee aad muujiseen”.
Cabdi Warsame oo hadalka sii wataya ayaa ku baaqay midnimo ,isaga oo sheegay in uu matalo dhamaan dadka deggen degmadda lixaad. Cabdi Warsame ayaa noqday Soomaaligii ugu horreyay ee ku guuleysta golaha deegaanka magaalada Minneapolis, kaddib markii la doortay November 6, 2013. Sidoo kale, Cabdi Warsame ayaa markale noqday qofkii Soomaali ah ee xil ama kursi uu hayo dib loogu loogu doorto.